नेपाल संवाद Archives - NepalDut NepalDut
पोखरा महानगरका ठूला वडामध्येमा पर्छ वडा नं. १७ । डेभिजफल्स, गुप्तेश्वर गुफा, अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालय, सेतीको गल्छी, फुस्रो किनारको गल्छीदेखि विरौटा फाँट यही वडामा पर्छन् । पोखराका मुख्य बजारको रुपमा परिचित विरौटा, छोरेपाटन, डेभिजफल्ससहित बस्ती विस्तार भइरहेका टोल यहाँ छन् । यस्तो विविधतापूर्व वडाको नेतृत्वमा एमालेले राधिका शाही योगीलाई अघि सारेको छ । गएको कार्यकालमा वडा सदस्य रहेकी उनले कार्यपालिका सदस्यको रुपमा स्थानीय सरकारको अनुभव लिइसकेकी छन् । स्कुलबाटै राजनीतिमा… पुरा पढौ
पोखराको मुख्य बजारदेखि नजिक रहेर पनि विकासमा पछि परेको पोखरा २२ पुम्दी भुम्दीमा पर्यटन र कृषिको उतिकै सम्भावना रहेको छ । आज भन्दा करिब ५ दशक अघि सिद्धार्थ राजमार्ग जोडिएको पुम्दी भुम्दीमा दृर्ण इच्छा शक्ति भएको व्यक्ति नभएको कारण अझै पनि विकासमा पछि परेको स्थानियको गुनासो रहेको छ । लामो समय देखि सामाजिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको व्यक्ति जसलाई मुख्यतः ४ राजनीतिक दलले समेत काध थापेर पोखरा २२ को वडा अध्यक्षमा… पुरा पढौ
मादीलाई नमूना पालिका बनाउँछौं: लालबहादुर गुरुङ
वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनमा कास्कीको मादी गाउँपालिकामा सत्तारुढ दलहरुबीचको गठबन्धनबाट नेकपा(माओवादी केन्द्र)का युवा नेता लालबहादुर गुरुङ उपाध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ मादी–७ को निर्वतमान वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाको प्रवक्तासमेत थिए । नेकपा(माओवादी)केन्द्र गण्डकी प्रदेश सदस्य समेत रहनुभएका गुरुङ गठबन्धनको साझा उम्मेदवारका रुपमा यति बेला चुनावी मैदानमा होमिएनुभएको छ । विद्यार्थीकालमा अखिल (क्रान्तिकारी)मा आवद्ध भएर राजनीति सुरु गर्नुभएका गुरुङले स्थानीय तह गठनअघि माओवादीबाट जिल्ला विकास समितिमा संयन्त्रको सदस्य भएर समेत… पुरा पढौ
भरतपुरको जग हाल्यौं, अब पूर्णता दिन्छौंः दाहाल
आगामी स्थानीय तहको चुनावका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी चासो रहेको क्षेत्र हो चितवनको भरतपुर महानगरपालिका । सत्तारुढ गठवन्धनका तर्फबाट प्रचण्डपुत्री रेणु दाहालको उम्मेदवारी परेको यस क्षेत्रमा कांग्रेसबाट बागी उम्मेदवारी परेपछि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेका छन् । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा रेणुले नेकपा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीलाई झिनो मतान्तरले पराजित गरेकी थिइन् । मतगणनाका क्रममा हारको त्राश उत्पन्न भएपछि माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र चपाएको घटना अहिले पनि धेरैले बिर्र्सिएका छैनन् । यसपालीको निर्वाचनमा पनि… पुरा पढौ
भरत शर्मामेयर उम्मेदवारगलकोट नगरपालिका, बागलुङ गलकोट नगरपालिकाको मेयरमा दोहोरिने यात्रामा हुनुहुन्छ, यहाँका नयाँ योजना के के छन् ? स्रोत, साधन सिमित हुँदाहुँदै पनि समग्र राज्यमा गलकोट राम्रो नगरपालिकामा पर्छ नि । ५ वर्षको यो अवधिमा धर्ती, फुटेको होइन, आकास खसेको होइन, अनेक विषम परिस्थितिहरु आए । ती परिस्थितिको सामना गर्दै हामीअघि बढ्यौं । शून्यबाट सुरु गरेको नगरपालिकालाई अहिले यो स्थानमा ल्याएका छौं । मेरो नेतृत्वमा गएको ५ वर्षमा उल्लेखनीय काम… पुरा पढौ
समृद्ध पोखराका लागि गठबन्धनलाई भोट :कोपिला रानाभाट
उपमेयर उम्मेदवार, पोखरा महानगरनेपाली कांग्रेससत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसबाट उपमेयर उम्मेदवार बन्नुभयो, यहाँका एजेन्डा के के छन् ?आज मैले नेपाली कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्दै पोखरा महानगरको उपमेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएँ । यो मेरो पार्टीको मात्र होइन, ५ दलको तर्फबाट दर्ता भएको उम्मेदवारी हो । पोखरालाई सफा, सुन्दर र हराभर बनाइराख्नु र भावी पुस्तालाई अझ राम्रो पोखरा प्रदान गर्नु जरुरी छ । हामी समृद्ध पोखरा र सुखी पोखरेली बनाउन लाग्नेछौं । गठबन्धनको उम्मेदवार भएकाले… पुरा पढौ
एजेन्डा अब्बल छन्, गठबन्धन मजबुत छ
देशकै ठूलो महानगर पोखरामा स्थानीय चुनावमा रोचक प्रतिश्पर्धा हुँदै छ । सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका नेता धनराज आचार्य मेयर उम्मेदवार छन् भने एमालेले अढाइ दशकअघिका मेयर कृष्ण थापालाई टिकट दिएको छ । उपमेयरमा सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसकी कोपिला रानाभाट मैदानमा छिन् भने एमालेले वर्तमान उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङलाई नै दोहो¥याएको छ । यसअघिको प्रदेशसभा निर्वाचनमा आचार्य थापाका चुनावी कमान्डरसमेत थिए । उम्मेदवारीको औचित्य र जितका आधारबारे सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार धनराज आचार्यसँग गरिएको… पुरा पढौ
नेपाली वाङ्मयका सेवक मिलन बोहोरा नेपाली कवितामा नयाँ सुगन्ध थप्दै छन् । भारतको असमबाट बोहोराले रम्बास शैलीको कवितालेखन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जाल, पत्रपत्रिका र इपत्रिका हुँदै रम्बास शैली भारत, नेपाल र विभिन्न देशमा रहेका नेपालीसम्म पुगिसकेको छ । बोहोराको पहिलो कृति रम्बास कविता सङ्ग्रह तानाबाना हो। अब पर्यायक्रममा गद्यकविता र उपन्यास प्रकाशित गर्ने उनको परिकल्पना छ। उनका कविता, लेख आदि धेरै पत्रपत्रिकामा छापिएका छन्। असम नेपाली साहित्य सभा, भारतीय… पुरा पढौ
कृषि एम्बुलेन्स चलाउँदै गण्डकी सरकार -मन्त्री शर्मा (भिडियोसहित)
कृषि एम्बुलेन्स चलाउँदै गण्डकी सरकार पुँडिटार र नबलपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाइने -मन्त्री शर्मा https://youtu.be/NAHsLwzr2M8 पुरा पढौ
बागलुङमा नेकपा एमाले स्थापक मध्यका एक रामजी प्रसाद शर्मा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा खुलेका छन् । पूर्व ऊर्जा राज्यमन्त्री समेत रहेका शर्मा एमाले विभाजन भएपछि माधवकुमार नेपालले स्थापना गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेको बताएका हुन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको व्यक्तिवादी चरित्र विरुद पार्टीमा हाबी भएको कारण एमाले विभाजन भएको टिप्पणी गरेका छन् । ओलीले संसद् विघटन गरे देखी ओलीको प्रवृत्ति मन नपरेको र एमाले छाडेर समाजवादीमा आएको बताए ।दक्षिणपन्थीको इसारामा गुटको… पुरा पढौ